Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Hawl wadeenka ka ah qaybaha kala duwan ee jaaliyaadka Uk oo London kukulmay
Xubnaha Hawl wadeenka ka ah qaybaha kala duwan ee jaaliyaadka Uk oo London kukulmay
Xubnaha maamulka guud ee jaaliyada & qaybaha kala duwan ee maamulka iyo laamaha hay’adaha jaaliyada Somalida Ogadenia eeUKayaa kulan kuyeeshay magaaladaLondon. Kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay HAAB JWXO Halgame M A Yassin Diirane.Kulankan oo ahaa midkii bilaha ee ay hawlwdaeenka jaaliyadu yeelan jireen ayaa lagu qiimaynayay waxyaabhii qabsoomay bishii tagtay iyo sidii laamaha ay jaaliyadu ka koobantahay ay warbixinada u kala qaadan lahaayeen.
HAAB Mudan Diirane oo 3 bilood ee u danbaysay kormeer shaqo ku marayay jaaliyadaha S.Ogadenia ee kudhaqan waqooyiga Ameeriga ayuu GKX Jaaliyada Mudane Hamse shariif oo shirka hogaaminayay uu ku soo dhaweeyay si uu xubnaha oogaga warbxiyo hawlihii shaqo ee uu ku kormeerayay jaaliyadaha USA ee S.Ogadenia.
Mudane Diirane ayaa si qoto dheer uga warbixiyay safarkiisii iyo natijadii uu kala soo kulmay Jaaliyadaha S.Ogadenia intii uu kormeerayay, wuxuuna sharaxaad ka bixiyay qaabka iyo horumarka uu kormeerkiisii ku soo qabsomay, isagoo muujiyay yididiilo lagu naaloon karo oo uu ka muujiyay shacabka S Ogadenia ee USA iyo sida ay ugu kalsoon yihiin halganka, diyaarna ugu yihiin inay qaybtooda ka qaataan.Wuxuuna hadalkiisii kusoo gabagabeeyay; “Waxaa hubaala in maanta laysku halayn karo walwala uusan ka hayn in uu duudsamo xaqa shacabka Somalida Ogadenia sababtoo ah dadkii Ogadenia ayaa waxay si dhaba ugu dhaqaaqeen in ay xaqooda dhacsadaan., dhankasta hiil & hoona lagarab istaagaan baadi goobka aayahooda.”
Mudane Diirane wuxuu amaan u diray shacabka geesiga ah ee diiday keenada gumaysiga faashalka ah, ee u istaagay sikasta oo ay cadawga uga soo dhacsan lahaayeen xaqooda, niyad iyo kalsoonina u haya inay intay doontaba ha qaadatee soo dhacsadaan aayahooda.
Kadib ayaa waxaa warbxino kala duwan jeediyay qaybaha kala duwan jaaliyada iyo urarada Bulshada waxaana qiimayntii warbixinaha laysla qiray in sidii loogu talaagalay u qabsoomeen hawlihii bishii tagtay.
Hay’adaha shirka kasoo qaybgalay oo ay kamid ahaayeen OYSU, OWRA, indheergaradka, culuma awdiinka IWM, ayaa waxaa halkaas isna xubnaha kula hadlay Ugaas Gamaadiid oo ah rugcadaa kamida indheergaradka S.Ogadenia marxalada badana u soo taagnaa isagoo taariikh dheer ka siiyay waxyaabihii uu u soo taagnaa ama uu maqlayba. Marka aan qiimeeyo ayuu yidhi xaalada maantana waxaan dareemayaa in xaqeenii aan madixii qabanay minjihii uun aan sugayno. Waxuuna ku booriyay xubnaha shirka; “Waxaad nasiib u yeelataan in gadgadoonkii marxaladihii qalafsanaa ee dadkeenu soo maray aad idinku noqotaan kuwa nasiib u yeeshay aayihii loo soo maray safarada dheer oo halaagana loo soo mutay.” Hadaba waxaan idin odhan ayuu yiri ugaas Gamaadiid, noqda kuwii ilaahay xaqa waafajiyo ee kafaaiidaysta fursadan dahabiga ah ee ina horyaala.Ugaasku wuxuu amaan u diray dhamaan shacbka Ogadenia ee diiday inay is dhiibaan, guulaysta ayuuna ku soo gabagabeeyay hadalkiisi dheeraa.
Warbixinihii iyo doodihii dheeraa kadib waxaa la dajiyay qorshaha mustaqbalkan dhaw iyokandheer, waxaana lagu balamay in la balaadhiyo waxqabadka jaaliyada iyadoo xubnuhu u balameen shir kale si loosii hormuriyo hawlaha jaaliayada ee danaha shacabka dulman loogu adeegayo.
Madaxa warfaafinta Jaaliyada Ogadenia/ONA